Io politika momba ny tsiambaratelo io dia natsangana mba hanompoana kokoa ireo izay mihevitra ny fampiasana ny 'fampahalalana manokana momba azy ireo manokana' (PII) amin'ny aterineto. PII, araka ny voalaza ao amin'ny Lalàna momba ny tsiambaratelo UAE sy ny filaminan'ny filazam-baovao, dia fampahalalana izay azo ampiasaina amin'ny tenany manokana na amin'ny fampahalalana hafa mba hahafantarana, hifandraisana, na hitadiavana olona iray, na hamantarana olona iray ao anaty sehatra. Azafady vakio amim-pitandremana tsara ny politikantsika manokana mba hahazoana fahatakarana mazava amin'ny fomba fanangonana, fampiasana, fiarovana na fanamafisana ny fampahalalam-baovao manokana anao mifanaraka amin'ny tranonkala.
Inona no fampahalalana manokana ananantsika amin'ny olona mitsidika ny bilaogintsika, tranokala na app?
Rehefa misoratra anarana ao amin'ny tranokalanay dia mety hangatahana ny hampiditra ny anaranao, adiresy imailaka, nomeraon-telefaona na tsipiriany hafa hanampy anao amin'ny traikefa anananao.
Manangona vaovao avy aminao ianao rehefa misoratra anarana ao amin'ny tranokalanay, misoratra amin'ny gazetiboky, mameno ny endrika, Mampiasà Live Chat na miditra ny tranokalanay.
Azontsika ampiasaina ny angona angatahinay aminao rehefa misoratra anarana, manoratra ho an'ny gazetinay, mamaly amin'ny fanadihadiana na fifandraisana amin'ny marketing, mijery ny tranonkala, na mampiasa karazana tranonkala hafa amin'ny fomba manaraka:
• Hanamafisina ny traikefanao ary hanome fahafahana anay hanome ny karazana votoaty sy tolotra tetikasa izay tena mahaliana anareo.
• Mandefa mailaka antserasera mikasika ny tombontsoan'ny tetikasanao na ny tolotra hafa.
• Raha te-hanaraka azy ireo aorian'ny fifandanjana (resaka mivantana, mailaka na fanadihadiana an-telefaona)
Ny tranonkalanay dia alaina amin'ny fototra ara-pahasalamana ho an'ny lavaka fandriam-pahalemana sy ny fahalemena malaza mba hahafahanao mitsidika ny tranokalanay ho azo antoka.
Mampiasa fizahana malware matetika izahay.
Tsy angatahantsika mihitsy ny fampahalalana manokana na tsy miankina toy ny isa amin'ny karatra.
Mampiasa cookies izahay mba hanatanterahana ny tanjon'ny mpampiasa. Azonao atao ny misafidy ny hampitandrina ny solosainao isaky ny mandefa cookie iray, na azonao atao ny manidy ny manidy ny cookie rehetra. Manao izany ianao amin'ny alàlan'ny fanovozan-tranonao. Koa satria tsy mitovy ny browser, jereo ny Help Menu ao amin'ny tranonkalanao mba hianatra ny fomba tokony hanovana ny cookies. Raha toa ka manova ny cookies ianao, dia misy sasantsasany hapetraka. izay mahatonga ny tranokalanao ho mahomby kokoa ary mety tsy miasa tsara. Na izany aza dia mbola afaka manoratra ny tombontsoanao ianao.
Tsy hivarotra, hivarotra, na handefasana amin'ny antoko ivelany ny fampahalalana momba anao manokana.
Tsy tafiditra ao anatin'ity tranonkala ity isika na manolotra tolotr'asa hafa.
Ny fepetra momba ny dokam-barotra Google dia azo fintinina amin'ny fitsipiky ny Google Advertising. Izy ireo dia natsangana mba hanomezana traikefa tsara ho an'ireo mpampiasa. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en
Mampiasa ny Google AdSense Advertising izahay ao amin'ny tranokalanay. Google, amin'ny maha-mpivarotra mpiara-dia azy, dia mampiasa cookies hanehoana dokambarotra ao amin'ny tranokalanay. Ny fampiasan'i Google ny cookie DART dia mamela azy hanolotra dokam-barotra ho an'ireo mpampiasa anay miorina amin'ny fitsidihana teo aloha tao amin'ny tranokalanay sy tranonkala hafa ao amin'ny Internet. Ireo mpampiasa dia afaka misafidy ny hampiasa ny cookie DART amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny politikan'ny fiainana manokan'ny Google Ad sy Content Network.
• Remarketing amin'ny Google AdSense
• Asehoy ny tatitra momba ny famoaham-peo Google Show Network
Izahay, miaraka amin'ireo mpivarotra hafa toy ny Google dia mampiasa cookies voalohany (toy ny cookies Google Analytics) sy cookies rahampitso (toy ny cookie DoubleClick) na marika hafa ho an'ny olon-kafa miaraka mba hanangona antontam-baovao momba ny fifandraisana amin'ny mpampiasa adiresin'ny ad na adiresy adiresy hafa raha mifandray amin'ny tranonkala.
Ny mpampiasa dia afaka mametraka fepetra amin'ny fomba amoahan'i Google anao amin'ny fampiasana ny pejy Google Ad Settings. Azonao atao ihany koa ny miala amin'ny tranokalan'ny Network Advertising Initiative Opt Out na manampy amin'ny fampidirana ny Google Analytics Opt Out Browser.
UAE Online Act Protection Act
Ny tanjona napetraky ny lalàna dia mihoatra noho ny any Emirà Arabo mitambatra mba hitakiana olona na orinasa ao amin'ny GCC (ary mety ny tontolo eran-tany) izay manangona vohikala fanangonana fampahalalana manokana avy amin'ny mpanjifa UAE hametraka politika manokana momba ny tsiambaratelo ao amin'ny tranonkalany izay mametraka marina ny angona nangonina ary ireo olona ireo na orinasa ifampizarana aminy.
Araka ny lalàna dia manaiky ireto manaraka ireto isika:
Ireo mpampiasa dia afaka mitsidika ny tranokalantsika an-tserasera.
Raha vao noforonina ity politika ity, dia hampidirina rohy ao amin'io tranokala io izahay na fara-fahakeliny, ao amin'ny pejy manan-danja voalohany taorian'ny fidirana tao amin'ny tranokalanay.
Hahafantarina anao ny momba ny fiovana rehetra momba ny Politika momba ny fiainana manokana:
Afaka manova ny mombamomba anao manokana:
• Amin'ny alàlan'ny mailaka anay
• Amin'ny alalan'ny fifampiresahana aminay na amin'ny alalan'ny fandefasana tapakila fanampiana anay
Ahoana no fomba tsy ahafahan'ny tranokalantsika tsy manisy famantarana?
Manome voninahitra isika fa tsy manisy famantarana sy tsy manisy lalana, mametraka cookies, na mampiasa dokam-barotra rehefa eo ny toeran'ny navigateur tsy mandeha (DNT).
Manampy ny fanarahamaso ny fitondran-tena ve ny tranonkala?
Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa mamela ny fanarahamaso fitarihana fahatelo
COPPA (Lalàna momba ny fiarovana ny Zon'ny Internet)
Raha mikasika ny fanangonana ny fampahalalam-baovao manokana avy amin'ireo ankizy latsaky ny taona 13 taona, ny Lalàna momba ny fiarovana amin'ny fiainana an-tserasera ho an'ny ankizy (COPPA) dia mametraka ny ray aman-dreny hifehy. Ny Komity Federaly Federaly, ny fikambanana mpiaro ny mpanjifa ao Etazonia, dia mampihatra ny fitsipi-pifampifehezan'ny COPPA, izay manonona izay mety ho ataon'ny mpandraharaha tranonkala sy ny serivisy amin'ny aterineto mba hiarovana ny fiainan'ny ankizy sy ny filaminana an-tserasera.
Tsy mividy manokana ny ankizy amin'ny taona 13 taona isika.
Ny fampiharana ny fampiharana ara-pahalalahana Ny fitsipi-pifehezan'ny Fitsipi-pifehezana dia ny endriky ny lalàna momba ny tsiambaratelo any Etazonia ary ny foto-kevitr'izy ireo dia manana anjara lehibe amin'ny fampandrosoana lalàna fiarovana ny tontolo iainana manerantany. Ny fahatakarana ny fitsipi-pahalalana momba ny fampiharana ara-pahalalana sy ny fomba tokony hampiharana azy dia tena ilaina amin'ny fanatanterahana ireo lalàna momba ny tsiambaratelo samihafa izay miaro ny fampahalalana manokana.
Raha te hifanaraka amin'ny fampahalalam-baovao ara-drariny isika dia handray ity fihetsiketseham-panoherana manaraka ity, raha misy voka-pifanarahana mitranga:
Hampahafantatra anao amin'ny alàlan'ny mailaka izahay
• Ao amin'ny Business Day 1
Manaiky ihany koa ny Fitsipika Fototra Manokana izay mitaky ny zon'ireo manana zo hanenjika ara-dalàna ny zon'izy ireo amin'ny zon'ireo mpanangona sy processeur izay tsy manaraka ny lalàna. Ity fitsipika ity dia tsy mitaky ny zon'ireo olona manana zo hampiasa ny mpampiasa mpampiasa, fa koa ny an'ny olona tsirairay dia mitaky fitsarana na orinasam-panjakana hanadihady sy / na hanenjika ny tsy fanarahan-dàlana amin'ny processed data.
CAN Act Act
Ny Lalàna CAN-SPAM dia lalàna iray mametraka ny fitsipika ho an'ny mailaka ara-barotra, mametraka ny fepetra momba ny hafatra ara-barotra, manome ny olona manan-jo hanana alàlan'ny mailaka ho azy ireo, ary mamoaka sazy henjana noho ny fandikana.
Raha toa ka te hiala amin'ny fandraisana email ianao amin'ny fotoana rehetra, dia azonao atao ny mandefa mailaka amin'ny info@providentestate.com ary hanala anao avy hatrany amin'ny alàlan'ny taratasy fangatahana.
Raha misy fanontaniana mikasika ity politika momba ny fiainana manokana ity, dia azonao atao ny manontany anay amin'ny fampiasana ny fampahalalana eto ambany.
#602, trano fonenan'i Al Zarooni,
Emirà Arabo Mitambatra.